सीमा विवादबारे बालुवाटारमा बैठक जारी कोको छन् सहभागी ? « Harekpal
सीमा विवादबारे बालुवाटारमा बैठक जारी कोको छन् सहभागी ?
काठमाडौं, २३ कात्तिक । भारतले भर्खरै जारी गरेको नयाँ नक्शाप्रति देशभर विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी हर्मा ओलीले शनिबार ४ बजेका लागि बोलाएके सर्वपक्षीय बैठक प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा जारी छ ।
सीमा विवादका सम्बन्धमा बोलाइएको सो सर्वपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी सहभागी छन् ।
त्यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित सरकारका मन्त्रीहरू, सीमाविद्हरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू, विभिन्न दलका नेताहरूकाे पनि बैठकम सहभागिता छ ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद, भारतीय पक्षबाट नेपालका भूमि अतिक्रमणबारे छलफल गरी राष्ट्रिय धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक राखेको बुझिएको छ ।
निधारित समयभन्दा केही ढिला गरी सुरु भएको बैठकका सहभागीहरूले सरकारलाई आफ्नो आफ्नोतर्फबाट सुझाब दिइरहेका छन् । भारत सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरेर विवाद टुंग्याउनुपर्ने सबैजसो सहभागीको सुझाब छ ।
भारतले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालका भूमिहरु लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत समावेश गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । सबै पक्षसँग छलफल गरी सीमा विवाद अन्त्यका लागि भारतसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ ।